အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ပါလီလို (၂)
ကြေးသွန်းရုပ်လေးတွေပါ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ သက်သက်လုပ်ထားပေးတယ်ထင်တယ်။ ဘာအထိန်းအမှတ်မှတော့ ဟုတ်ဟန်မတူဘူး။ ကိုယ်မသိတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ။ သို့မဟုတ် အီတလီ မြို့လေးနဲ့တူအောင် လုပ်ထားတာလားမှ မသိတာ ဥပမာ ကိုယ်တို့ မက္ကစီကို သွားတုံးက ဆို လမ်းပေါ်မှာ အဲ့လို ဘာညာဘာညာ ကြေးသွန်းရုပ်တွေ ခုံတွေ များမှများ။ အနုပညာပေါ့။ ပြောသားပဲ သူ့အရပ်နဲ့သူ့ဇာတ်ပါဆို။ အော် မေ့တော့မလို့ နောက်မှာ သတိထားကြည့်................ တွေ့လာ?
xxxxxxxxxxx....... နေပူပူ ဆန်းဒေး နေ့တနေ့မှာ ကွယ်.......ပါလီယိုလမ်းထဲ လျောက်မိပြန်တယ်.............xxxxxxxxxxx
နောက်နေ့မှာ ခေါဝ်ရိုဝ် အကြောင်းဆက်မယ်နော်.......ဝုိုင်ခြံ အကြောင်းလဲ ကျန်သေးတယ်။ နောက်တပိုင်းတော့ ထပ်မျှော်အုံး။
Posted by တီချမ်း at 9:45 AM
Crystal January 27, 2012 at 11:03 AM
ပုံလေးတွေလည်း လှတယ်၊ ကျေးဇူးလည်း တင်တယ်။
မျှော်လည်း မျှော်နေအုံးမယ် :)
တီချမ်း January 27, 2012 at 11:03 AM
ကျေးဇူးတွေ အပုံတရာကြီးလောက်ကို တင်ပါတယ် တီ :)
mabaydar January 27, 2012 at 2:40 PM
အဲဒိနေရာလေးက ဘန်ကောက်နဲ့ နီးလား... စိတ်ဝင်စားစရာလေး... လှလဲလှသားပဲ... တီချမ်းက အကျီင်္အနက်နဲ့ ၂ထပ်ဝတ်ထားတဲ့တစ်ယောက်လား...
တီချမ်း January 28, 2012 at 3:01 AM
မဗေဒါ အပိုင်း (၁) ကိုပြန်ဘတ်ပါ
အင်္ကျီ အမဲနဲ့က တီချမ်း လင် မောင်ဖြစ်ပါတယ်
You have lost weight , diet or exercise?
တီချမ်း January 28, 2012 at 4:40 PM
i am even thinner now
What did you do? You cook really well, so it must be exercise...
တီချမ်း January 30, 2012 at 8:26 AM
i work in NGO, but now coz of your comment thinking about quitting the job and may be openarestaurant????
Yes, you should openarestaurant and beawriter as well. Most importantly, will you write about how to loose weight. Seriously, I really need to loose weight.
တီချမ်း January 30, 2012 at 3:21 PM
hahaha i hope this is not thit thit????
just kidding, yes actually there isaplan for really quittingajob and focus on not only writing but also lots of time for reading and just to openasmall restaurant for survival, well don't wanna be rich but don't wanna starve myself either, but also thinking about blogging in eng for better and more audiences.
losing weight i am not sure i am an expert of it, well justafew tips may be here you go....
1) get your heart broken, (you know bf problems, cry, tears and not eating stuffs surviving the whole day with coffee and then cry again go to sleep LOL
2) walking, i did walkalot so may be you should try that
3) catchavirus, like HIV it will automatically lose your wieght forawhole bit, may be i am fall into that categories. so don't do that NOT good
4) seriously bf problems helpalot
mstint January 30, 2012 at 10:51 AM
တီချမ်းရေ ပါလီလို ၁ နဲ့ ၂ ကနေ ဗဟုသုတတွေယူသွားတယ်။ ကျေးဇူးပါနော်။
တီတင့်ရဲ့ ကင်မ်ချီလင့်ကို ထားခဲ့တယ် နှစ်မျိုးစလုံးစမ်းကြည့်နော်း)